I-Mac Pro SSD Kit Ukufaka Ividiyo | Ngivela kwa-mac
Ividiyo Yokufaka ye-Mac Pro SSD Kit
I-Modular Mac Pro iyilokho ebesikudinga kwikhompyutha enentengo ephezulu kangako futhi edinga ukuvuselelwa njalo ukuze ithuthukise ukusebenza kwayo eminyakeni edlule. Ngalo mqondo eyedlule iMac Pro kusuka ngo-2013 yayilinganiselwe kakhulu maqondana nalokhu, yize kuliqiniso ukuthi usayizi ubuncane futhi ukwakheka kwangaphandle bekungaphezulu kokukhethwa kukho kokusebenza kwemishini.
Lokhu sekuvele kungaphandle kombuzo futhi iMac Pro entsha inikeza lokho esikucelile sonke kuzinketho zokuhlela ngokwezifiso futhi lokhu kuboniswa kuvidiyo esiyibonayo ukuthi kulula kanjani ukufaka ikhithi ye-Apple SSD. Ividiyo ivela Intanga ye-AppleInsider.
Le yividiyo yokufakwa kwekhithi ye-SSD abayenzile ku-AppleInsider:
Ikhithi ye-SSD engu-1 ye-Mac Pro isinikeza izinketho eziningi ngosayizi wesitoreji sangaphakathi se-SSD semishini. Ngalo mqondo, njengoba sikwazi ukubona kuvidiyo, ikhithi iqukethe amamojula amabili e-SSD angama-512 GB lilinye lawo afaka lawo afakwe ohlelweni. Kubalulekile ukuqaphela lokho kwe faka isoftware, iMac yesibili ene-Apple Configurator 2 nekhebula le-USB-C liyadingeka iyahambisana Mac Pro.
Kule vidiyo, ngaphezu kokukhombisa izinyathelo zokufaka zale kit, ifundiswa ukuthi ukufakwa kwesoftware okufanele kwenziwe kusuka kwenye i-Mac kusebenza kanjani, njengoba kwelulekwa yi-Apple. Iqiniso ukuthi ubulula benqubo empeleni yilokho abasebenzisi abangochwepheshe balolu hlobo lomshini abakufunayo, ngaphandle kokungabaza into ebi kakhulu kungaba yintengo yala makhithi Zisuka kuma-euro angama-750 nge-1 TB yokugcina kuya kuma-3.500 euros we-8 TB.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Amakhompyutha we-Mac » Mac Pro » Ividiyo Yokufaka ye-Mac Pro SSD Kit
IMac Pro entsha iyona nto ebaluleke kakhulu i-Apple ekwazile ukusinikeza yona ama-freelancers nezitudiyo ezincane, ebezisebenza nebanga lePro selokhu lasungulwa. Isu elibenze balahlekelwa ngabasebenzisi abaningi abangochwepheshe, kusukela ngePro ye-2013 futhi, ngaphezu kwakho konke futhi mhlawumbe nalokhu babengenalo udumo.
Nge-watchOS 7 ungafihla izithonjana ze-Control Center
Umsunguli nombonisi we-Defend Jacob akahluleli isizini yesibili